Soo bandhigida hababka bayoolojiyeynta ma ahan mood, laakiin waa mid loo baahan yahay waqtiga - Nidaamka Baradhada
в Isbeddellada / Isbeddellada, Injineerinka / Teknolojiyada
Mowduuca biologisation-ka beeraha wuxuu noqday midka ugu deg deg sanadahan dambe. Waxaan kala hadalnay Svetlana Nekoval, madaxa shaybaarka aruurinta taranka yaanyada ee Machadka Cilmi baarista ee All-Russian (FGBNU VNIIBZR), oo ku saabsan sida saynisyahannada Ruushku u qiimeeyaan rajada laga qabo soo bandhigida qaababka bayoolojiga iyo isticmaalka wax soo saarka bayoolojiga ee beeraha beeraha gudaha.
- Suuqa adduunka ee wax soo saarka noolaha, by marka loo eego qiyaasaha khubarada, waxay koraan 8% sanadkiiba. Ma dhihi karnaa in isbeddelladani ay khuseyso Ruushka sidoo kale?
Dabcan, caan ka ahaanshaha wax soo saarka bayoolojiga dalkeenu wuu sii kordhayaa sanad walba. Sababaha ugu waaweyn ee koritaanka dalabku waa xaalufka carrada ee aan la beddeli karin sababo la xiriira isticmaalka dheer ee Bacriminta kiimikada iyo alaabada dhirta laga ilaaliyo; Saamaynta xun ee kiimikadu ku leedahay caafimaadka dadka, labadaba iyada oo ay ugu wacan tahay ficil toos ah iyo natiijada ka soo baxda aruurinta qadar haraaga ah ee sunta cayayaanka ee wax soo saarka beeraha iyo biyaha la cabbo; hoos u dhaca kala duwanaanshaha noolaha ee cayayaanka (gaar ahaan, cayayaanka wasakhaynaya). Kordhinta sanadlaha ah ee sunta cayayaanka ayaa sidoo kale gacan ka geysata xoojinta isbedelka.
Sannadkan, xiisaha beeralayda ee wax soo saarka bayoolojiga ayaa sidoo kale kicisay galitaanka sharciga "On alaabta dabiiciga ah iyo wax ka beddelka qaar ka mid ah falalka sharci dejinta ee Xiriirka Ruushka", sida ku cad oo kaliya alaabada ilaalinta dhirta bayoolojiga loo isticmaali karo si loo helo alaabada bey'ada u habboon iyo quudinta.
- Yaa loogu yeeri karaa Ruushka macaamiisha ugu muhiimsan ee wax soo saarka noolaha (wax soo saarka dalagga)?
Sida laga soo xigtay Sergei Korshunov, Guddoomiyaha Guddiga Ururka Beeraha Dabiiciga ah, ficil ahaan ma jiraan beero ku yaal Bartamaha Ruushka oo aan isticmaalin hababka bayoolojiga nooc kasta ha noqotee (dalabidda bacriminta dabiiciga ah ee ciidda, isticmaalka diyaarinta microbiological, soo bandhigida digada cagaaran ee cagaaran ama ku daboola dalagyada dalagga). Waan ku raacsanahay isaga.
Beeraha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah iyo haynta beeraha waaweyn waxay isku dayayaan inay ka guuraan soo saarida wax soo saarka iyagoo isticmaalaya kaliya hababka kiimikada ee lagula dagaallamayo walxaha waxyeellada u leh ilaalinta dhirta isku dhafan (isku darka "kiimikada" iyo "bayoolaji"), iyo qaar ka mid ah - beeraha dabiiciga ah.
Beero badan oo waaweyn ayaa u qoondeeya beero tijaabo ah oo loogu talagalay beero-falashada iyagoo isha ku haya soo saarista wax soo saarka gebi ahaanba dabiiciga ah.
Dhibaatada ugu weyn ee cilmiga bayoolojiga ayaa si toos ah ugu jirta miisaankeeda. Habka bayoolojiga ah ee aan xisaabinta shaqsiyeed mid kasta iyo dalag kasta u shaqeynaynin. Waa lagama maarmaan in si joogto ah loola socdo xaaladda ciidda iyo in lala socdo horumarka dhirta. Beeraleyda badankood diyaar uma aha inay indha indheyn sax ah ku sameeyaan xaalada jirka ee dhirta ama ma qiyaasi karaan.
u oggolow, sidaa darteed, waxay si indho la’aan ah ula shaqeeyaan cilmiga nafleyda, iyagoo inta badan hela natiijooyin aan lagu qancin. Isla mar ahaantaana, shirkado badan oo beeraha ka mid ahi waxay adeegsanayeen habka bayoolajiga ee qorshooyinka isku dhafan ee lagu beerayo dalagyada beeraha in ka badan 10 sano, iyagoo si guul leh u bartay cilmiga farsamadaas.
- Qaar ka mid ah soo saarayaasha beeraha waxay yiraahdaan ka shaqeynta wax soo saarka noolaha ayaa ka qaalisan isticmaalka CCPP; weliba, waxay u baahan yihiin dadaal iyo aqoon dheeri ah, natiijaduna badanaa way ka sii liidataa. Waa quraafaad? Mise dhammaantood waxay kuxiranyihiin dhibaatada ay beertu isku dayayso inay xalliso?
Haddii dhammaan shuruudaha iyo sharciyada isticmaalka alaabada bayoolojiga la buuxiyo, markaa waxtarka bayoolojiga wuxuu u dhigmaa heerka waxtarka alaabada kiimikada, kharashkuna aad ayuu uga hooseeyaa. In kasta oo, dabcan, inbadan ay kuxirantahay nooca dhibka dhaqaaluhu isku dayayo inuu xaliyo. Dalbashada hababka bayooloji ee ilaalinta dhirta, waa in maskaxda lagu hayaa in waxtarka ugu weyn la gaaro marka la qaadayo tallaabooyin ka hortag ah. Haddii alaabada bayoolojiga loo isticmaalo ujeedooyin daawo, markaa xaalad kasta oo shaqsiyeed waa lagama maarmaan in la doorto qaar (iyadoo la raacayo heerka fiditaanka walxaha waxyeelada leh) qiyaasta daawooyinka.
Tusaale cad oo ah xaqiiqda ah inay suurtagal tahay in la gaaro natiijooyin sare lana yareeyo kharashka isticmaalka qalabka difaaca waa cilmi baarista shaybaarkayaga, oo si wada jir ah loola sameeyo shirkadda Biotechagro, si loo barto nidaamka ilaalinta bayoolaji ee miraha strawberries ee walxaha waxyeellada leh, oo ay ku jiraan nematodes, iyo sidoo kale in la barto waxtarka ilaalinta baradhada dhulka u furan ee leh diyaarinta maaddooyinka noolaha ee ay soo saarto Biotehagro LLC.
Iyada oo la kaashanayo alaabada bayoolojiga ku saleysan noolaha dabiiciga ah ee waxtarka leh, waxaan ku guuleysanay in aan yareyno horumarka iyo faafitaanka noolaha waxyeellada u leh EPV-ga, si loo kordhiyo (loo soo celiyo) dhalidda noocyada kala duwan ee miraha strawberries iyo baradhada, si si weyn loo yareeyo kharashka fulinta tallaabooyinka ilaalinta; yaree culeyska sunta cayayaanka ee dhirta iyo carrada, hagaajinta tayada dalagga.
Tusaale ahaan, waxsoosaarka baradhada wuxuu ku kordhay biosecurity
by 15%, iyo qiimaha alaabada bayoolojiga ah marka la barbardhigo wakiilada kiimikada ayaa hoos u dhacay 6 jeer, isla mar ahaantaana, istaarijka iyo fitamiin C-ka ku jira digriiga ayaa kordhay iyo xaddiga nitrogen nitrate ah.
- Ma loo baahan yahay in la tababaro soo saarayaasha beeraha si ay ula shaqeeyaan wax soo saarka bayoolojiga?
- Tababarku waa lama huraan. Aqoonyahan cilmiga beeraha khibrad uleh waa inuu lashaqeeyaa "bayoolaji", halkan waxaa sifiican u cadeeya daahida iyo waqtiyada dhamaan howlaha. Waa lagama maarmaan in si adag loo raaco talooyinka soo-saaraha oo lala macaamilo oo keliya alaab-qeybiyeyaal lagu kalsoon yahay.
Haddii beertu aysan ku qanacsaneyn natiijooyinka isticmaalka alaabada bayoolojiga, soosaarayaasha ama iibiyaasha ayaa inta badan lagu eedeeyaa fashilka. Mararka qaarkood jahwareerka hal daawo ayaa loo wareejiyaa guud ahaan difaaca nafleyda guud ahaan. Isla mar ahaantaana, iyada oo aan khibrad u lahayn la shaqaynta alaabada bayoolojiga, cilmiga beeraha ayaa inta badan iska indhatira talooyinka takhasusleyaasha.
Khaladaadka ugu badan ee dhaca marka lala shaqeynayo bayoolaji:
• U hogaansami la'aanta shuruudaha kaydinta.
Diyaargarowga ay ku jiraan noolaha noolaha, u hoggaansamida xaaladaha kaydinta ayaa lagama maarmaan ah. Waxaa jira shey aad u yar oo u dulqaadan kara heer kulka illaa + 30 ° C, gaar ahaan kuwa muddada gaaban. Dadka kale, waa musiibo. Intaas waxaa sii dheer, diyaar garowga qaarkood, noolaha wuxuu noqon karaa qaab unugyo nool waxayna aad ugu nugul yihiin isbeddelada heerkulka, kuwa kale waxay ku nool yihiin qaab spore ah.
• Isticmaalka daroogada oo uu dhacay taariikh dhacday.
Waxyaabaha bayoolojiga, sida alaabada kale ee kahortaga dhirta, Bacriminta iyo kiciyaasha koritaanka, waxay leeyihiin nolol u gaar ah. Waxay kuxirantahay halabuurka gaarka ah ee sheyga noolaha. Diyaargarowga ay kujiraan bakteeriyada qaar ee genus Pseudomonas ama Rhizobium (qeybta dambe waa qeyb kamid ah bioinoculantska loo isticmaalo in lagu daweeyo miraha miraha legume
dhirta si loo kiciyo habka loo hagaajiyo nitrogen-ka jawiga), sida caadiga ah, waxay leeyihiin nolol gaaban - laga bilaabo hal bil illaa lix bilood, gaar ahaan marka ay timaado qaab dareere ah.
Haddii diyaargarowyadan lagu sii daayo qaab qalalan ama walxo khaas ah - ilaaliyayaal - ayaa lagu daraa dareeraha dhaqanka, ka dibna waa la keydin doonaa muddo yar. Alaabta ay ku jiraan fangaska genus Trichoderma ama bakteeriyada hiddo-wadaha Bacillus, Azotobacter iyo qaar kale ayaa kaydsan waqti dheer.
Waa in la ogaadaa in calaamadda soo saaraha ay ku tusinayso nolosha shelf ee baakadaha asalka ah ee aan la furin. Dad badan ayaa iska indhatira faahfaahintan "aan qiimo badnayn", iyagoo rumaysan in xirmo furan ay taagnaan doonto muddo sannad ah iyada oo aan lumin tayada.
• Daaweynta alaabta bayoolojiga isla markiiba ka dib wakiilada bakteeriyada ama wada jir.
Waxyaalaha Microbiological-ka ayaa isla mar loo isticmaali karaa alaabooyinka kale ee bayoolojiga, laakiin dhammaantood maahan dhammaantood. Waxaa jira tiro wakiilo ah oo asal ahaan ka soo jeeda noolaha (derivatives of streptomycetes) oo loo isticmaalo dhirta ku soo baxda maadooyinka antibiyootigga. Saddex daroogo noocaas ah ayaa ka diiwaan gashan dalkeenna: "Kasugamycin", "Fitolavin" iyo "Fitoplasmin". Lacagtaan waxaa si guul leh looga isticmaalay cudurada, adiga
loo yaqaan bakteeriyada waxyeellada leh. Si loo xoojiyo guusha, waxay noqon laheyd wax macquul ah in lagu daaweeyo dhirta ka dib jeermiska jeermiska sida oo lagu soo bandhigo microflora faa'iido leh ciidda. Si kastaba ha noqotee, waa wax aan macquul aheyn in lagu daro wakiilada microbiological isla weelka isla antibiyootikada isla markaana lagu maareeyo hal daaweyn wadajir ah. Marka hore, waa lagama maarmaan in lagu daaweeyo walax antibiyootiko ah, ka dib 7-10 maalmood kadib, ku buufin dhirta ama ku waraabi ciidda shey bayoolaji leh bakteeriyada nool. Sidoo kale, waa wax aan macquul aheyn in lagu daaweeyo isku diyaarinta microbiological isku mar ama isla markaaba ka dib markii lagu buufiyo dhirta diyaarinta naaska ku jirta.
• Daaweynta cimilada qoraxdu kulushahay maalinta badhtankeeda.
Bakteeriya fara badan oo ka kooban wax soo saar bayooloji ah, oo saameyn ku leh iftiinka qorraxda, waxay u dhintaan ama yareeyaan xoojinta howlaha nolosha, gaar ahaan soo saarista walxaha bayoloji ahaan firfircoon - hormoonnada, enzymes, iwm, kuwaasoo daawooyinka siiya waxyaabo faa'iido leh. Ku dhowaad dhammaan soo-saareyaashu waxay kugula talinayaan diyaarinta xalka shaqeynaya iyo qabashada fiidkii. Haddii daroogada lagu soo bandhigo carrada, markaa waxaa lagu talinayaa in lagu simo carrada dusha sare leh rake ama lagu daboolo mulch.
• Isticmaalka xalka shaqada ee gabowday.
Xal kasta oo shaqeynaya ee alaabooyinka ka-hortagga dhirta ama bacriminta waa in aan la keydin wax ka badan hal maalin. Marka ay timaado alaabada bayoolojiga, waqtiga udhaxeeya ayaa sii yaraanaya. Waxaa fiican in sidan loo dhaqmo: la diyaariyey xaddiga loo baahan yahay ee xalka shaqada - lagu daaweeyo dhaqanka ama ciidda.
• Noocyo badan oo dareere ah oo ah diyaarinta waa in la isku qaso ka hor inta aan lagu shubin baakada asalka ah weelka diyaarinta xalka.
Tan waxaa lagu muujiyey dhammaan sumadaha baakadaha. Haddii aadan isku darin, si fudud uma heli doontid saameynta laga filayo daaweynta.
• Diyaarinta xalka biyaha barafka.
Badanaa, daroogooyinka waxaa lagu qasi jiray biyo aad u qabow (tusaale ahaan, ceel ama ceel). Tani waxay xalka ka dhigeysaa mid aan waxtar badan laheyn. Waxaa ugu wanaagsan in lagu diyaariyo xalka shaqada biyo diirran (ama heerkulka qolka).
• U hogaansanaan la'aanta sicirka isticmaalka, heerka soo noqnoqda iyo qaababka loo adeegsado.
Daawooyinka looma isticmaalo had iyo jeer si cad ujeedkooda. Qaar ka mid ah soo saarayaasha beeraha, xitaa iyagoo ilaalinaya qiyaasta saxda ah, waxay iska indha tirayaan tilmaamaha, kuwaas oo qoraya habka loo isticmaalo iyo heerarka isticmaalka. By the way, haddii tilmaamtu aysan ku lifaaqnayn daroogada (waa inay qasab ku noqotaa calaamadda baakadaha, oo laga yaabo inay sii dheer tahay warqad gooni ah, oo leh far waaweyn), ma iibsan kartid sheygaas. Haddii qaybaheeda lagu soo saaray xadgudub (tilmaamaha leh heerarka isticmaalka waa shuruud u ah iibinta alaabada ilaalinta dhirta diiwaangashan iyo bacriminta), markaa qofna ma xaqiijin karo ka kooban daroogada lafteeda.
• Daaweyn aan waqtigeedii la gaadhin ama daaweyn aan ku filnayn.
Dhammaan alaabooyinka kahortagga dhirta looma isticmaalo ka hortag ahaan, badiyaa waxtar bay yeelan karaan markay dhibaato dhacdo. Laakiin marka la isticmaalayo inta badan alaabada bayoolojiga ah (marka laga reebo taabashada - ka dhanka ah cayayaanka), aasaaska tabaha waa ka hortagga nidaamka.
- Yuu ku soo saaraa alaabada bayoolojiga Ruushka, intee in le'eg ayay hawshani socotay? Ayaa tijaabiya waxtarkooda? Daawooyinkani ma yihiin kuwo ku tartamaya suuqa adduunka?
Ruushka waa hogaamiyaha adduunka ee horumarinta wax soo saarka dhirta ilaalinta dhirta, jagooyinka hogaaminaya ee jihadaan waxaa ku guuleystey sayniska gudaha iyadoo ay ugu wacan tahay horumarka saynisyahanadeena. Saynisyahankii caanka ahaa ee reer Ruush Ilya Mechnikov ayaa loo arkaa inuu yahay aasaasaha bio-direction-ka beeraha, kaasoo qarnigii 1940-aad abuuray diyaarinta noolaha ugu horreeya adduunka ee ku saleysan fangaska entomopathogenic (wuxuu xakameynayaa cayayaanka waxyeellada leh). Dhayalsashada habka awgeed, soo saarista iyo adeegsiga daroogadaan waa la joojiyay bilowgii qarnigii 1960-aad, cilmi-baaristii ku saabsaneyd alaabada bayoolojiga waxaa dib loogu bilaabay kaliya 60-yadii. Horeba 300s, dhowr diyaargarow gudaha ah oo salka ku haya bakteeriyada ayaa hal mar la sameeyay (cida leh xuquuqda lahaanshaha ayaa hada ah softiweerka "Sibbiopharm"). Ka dib, wax ku ool ah waqtigaas daawooyinka cudurrada dhirta waxaa loo abuuray iyadoo lagu saleynayo noocyada dabiiciga ah ee bakteeriyada iyo fungi-antagonists of phytopathogens. Dawadii ugu horeysay ee ganacsi ee salka ku haysa fangaska (oo ay soo saartay All-Russian Research Institute of Plant Protection (VIZR)) waxay ahayd trichodermin, jeermiska bakteeriyada ahna wuxuu ahaa planriz. Hogaaminta Soofiyeedka ka dibna machadyada sayniska ee Ruushka ee beeraha, microbiology iyo virology waxay soo saareen ku dhowaad dhammaan khadadka la yaqaan ee alaabada bayoolojiga ah ee beddelaya analogues kiimikada. Maanta, mahadsanidiin iskudhafyada sayniska, ganacsiga iyo, qeyb ahaan, gobolka, in kabadan XNUMX badeecooyin bayooloji ah ayaa ka diiwaan gashan Ruushka, halka adduunka kaliya ay joogaan XNUMX oo kamid ah.
Soosaarayaasha ugu waawayn ee wax soo saarka noolaha ee Russia waqtigan xaadirka ah waa shirkadaha cilmi baadhista iyo waxsoosaarka - oo ay ku jiraan NVP "Bashinkom", laamaha Hay'adda Miisaaniyadda Dawladda Federaalka "Rosselkhoztsentr", PO "Sibbiopharm", LLC "Biotechagro", SCHP "Niva" iyo GK "Agrobiotechnology".
Territory-ka Krasnodar, soo saaraha kaliya ee ka diiwaangashan alaabada bayoolojiga ee ilaalinta dhirta waa OOO Biotehagro.
- Sideed u qiimeyn kartaa gobolka iyo rajada ay ka qabaan soo saarista wax soo saarka bayoolojiga ee dalkeena?
Guud ahaan, dabcan, wersheduhu waxay leeyihiin dhibaatooyin badan: xeerar looma abuurin mana jiraan shuruuc sharci dejin oo go'aamisa tayada daroogada; ma jiraan sheybaarro goboleed oo hubiya u diyaargarowga bakteeriyada ee tayada iyo tiirarka; mas'uuliyadda sharciga ah ee soosaarayaasha ee tayada daawooyinka lama qeexin; ma jiro maamul dowladeed oo ku saabsan isticmaalkooda.
Diiwaangelinta wax soo saarka bayoolojiga ee Ruushka ayaa ah hawl culus oo qaali ah, taas oo si weyn u horjoogsanaysa horumarka qaybta. Natiijo ahaan, mugga wax soo saarka Ruushka iyo baaxadda isticmaalka sunta xoolaha iyo wax soo saarka bayoolojiga ayaa si aad ah uga hooseeya heerarka Yurub iyo Ameerika.
Wax badan ayaa u dhiman in la sameeyo marka la eego daahfurka cilmiyaysan: waxaa lagama maarmaan ah, gaar ahaan, in lagu xalliyo dhibaatooyinka ku saabsan nolosha muddada gaaban ee alaabada bayoolojiga iyo diidmadooda liidata ee roobka
Si kastaba ha noqotee, waxaan ku kalsoonahay in dhibaatooyinka laga gudbi doono lana gaari doono himilooyinka la higsanayo. Soo bandhigida hababka bayoolojiyeynta ma ahan moodo, laakiin waa mid loo baahan yahay waqtiga, sannadaha soo socdana jihadaani waxay si firfircoon u horumarin doontaa.
Tags: 2020 .3Noolahabayoolaji
Waxaan xirnay casaan
Nafaqada macdanta ee isku dhafan ayaa fure u ah goynta caafimaadka leh
DEULA-NIENBURG AQOON YAHAN WAA GUUL!
Gobolka Kemerovo wuxuu hormuud u yahay marka la fiiriyo goynta baradhada Siberia
Dhul dalab ah